Beach soccer – Tamaga Midôla : Mandravarava i Melaky, sahirana i Menabe -
AccueilSongandinaBeach soccer – Tamaga Midôla : Mandravarava i Melaky, sahirana i Menabe
Beach soccer – Tamaga Midôla : Mandravarava i Melaky, sahirana i Menabe
Niditra teoamin’ny andro faharoa ny « Festival Tamaga Midôla” omaly. Hetsika ara-panatanjahantena karakarain’ny fikambanana Tafaray ao Toamasina, renivohitr’i Betsimisaraka. Marihina fa taranja fanao eny amin’ny tora-pasika no hifaninanana amin’ity “Festival Tamaga Midôla” ity. Ahitana ny beach soccer, beach volley, beach handball ary beach rugby.
Amin’ireo taranja-pifaninanana efatra hiadiana amin’izany, mbola ny taranja beach soccer ihany aloha, hatreto, no niaka-tsehatra. Ny alakamisy 4 septambra izao kosa vao miditra sy hifaninanana ireo taranja telo ambiny.
Araka izany, tao anatin’ny andro roa nifaninanana teo amin’ny beach soccer, mandravarava ny ekipa avy any Melaky. Fandresena roa tao anatin’ny lalao roa mantsy izao no azon’izy ireo. Izany hoe, mitarika vonjimaika eo amin’ny vondrona “B” misy azy izy ireo. Nandresy an’i Manakara tamin’ny isa mavesatra, 10 noho 1 izy ireo teo amin’ny andro voalohany, ary mbola nandavo an’i Morondava tamin’ny isa 4 noho 3 indray teo amin’ny andro faharoa. Ho an’ity ekipa farany avy any Menabe ity, sahirana izy ireo satria raha nandresy an’i Brickaville tamin’ny isa 2 noho 1 ry zareo tao amin’ny andro voalohany, lavon’i Melaky izy ireo teo amin’ny andro faharoa.
Mangotraka ny fifaninanana tamin’ity indray mitoraka ity, satria saika tazana miparitaka amin’ireo ekipa mpandray anjara ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa nasionaly Barea de Madagascar, toa an-dry Angeluc Razafinilaina manatevina an’i Brickaville, Bernardin Rasolomandimby sy Ymelda Razafimandimby ary Régis Emildien sy Flavien Razafimahatratra, kosa milalao ho an’i Toamasina Giovanno Oscar sy Fitana Romain ho an’i Morondava ary Julio sy Pako ary Jhorialy kosa ho an’i Mahajanga.
Mbola mitohy kosa ny fifanintsanana ho an’ny beach soccer, ary samy mampiseho ny fahaiza-manaony avokoa ireo ekipa folo mpandray anjara miady ny lohany.
Raha ny fanazavan’ny kolonely Nicolas fantatra amin’ny hoe Patou,dia anisan’ireo mpikarakara ny “Festival Tamaga Midôla” kosa, hotolorana ny Hopitaly Be an’i Toamasina ny vola azo rehetra mandritra ny hetsika. Izany hoe, hoenti-manampy ny hopitaly amin’ny fikarakarana ireo marary saina sy voan’ny aretin-tratra manaraka fitsaboana ao izany.
Marihina fa mpiara-miasa akaiky, sady mpanohana ny “Festival Tamaga Midôla” ny Vondrona RLM Communication.